Valan-javaboahary any Masoala – MNP: andramena nafenina ireo avoaka ankehitriny | NewsMada
Valan-javaboahary any Masoala – MNP: andramena nafenina ireo avoaka ankehitriny
Nanome fanazavana ny MNP momba famoahana andramena (bois de rose) avy ao Masoala. Efa natao tombana ireo harena voajanahary rehetra, zava-maniry sy biby, ao amin’io valan-javaboahary io, ny taona 2016.
Manana ahiahy tahaka ny rehetra ny MNP (Madagascar national parks) amin’ny fiarovana ny valan-javaboahary ao Masoala. Manjaka ny kolikoly ary mahafantatra na manao izany ny tompon’andraikitra sasany. Ka izany no nanaovana tombana ny harena voajanahary ao Masoala, ny taona 2016, nampanaovina ny Ivontoeram-pikarohana miadidy ny fanadihadiana ny tontolon’ny valan-javaboahary miaraka amin’ny Oniversiten’Antananarivo.
Ho famintinana, salama ny ao Masoala, araka ny fanadihadiana nataon’ny Association Vahatra, nahazoam-bola avy amin’ny Unesco /Norad/ FAPBM. Voasoratra fa tsy miova amin’ny endriny ny biby sy ny hazo, sy mihatsara ny fitomboan’ny zavamanan’aina ao Masoala.
Nomarihin’ny MNP fa tsy nisy tao anaty faritra arovana intsony ny fanapahana andramena nanomboka ny taona 2014. Ireo andramena heno mivoaka ireo, hazo notapahina nandritra ny krizy politika tamin’ny taona 2009 ka hatramin’ny 2013. Nafenina ireo hazo ireo, nisy tany anaty renirano, ranomasina, tanimbary, anelakelan-trano, ka manomboka avoaka an-tsokosoko tsikelikely izy ireny, ankehitriny. Tsy azo lavina ny fanapahana hazo hanaovana trano, satria ny olona mila izany amin’ny fiainany andavanandro.
Voamarina ny famonoana gidro
Voamarina ny famonoana gidro, nefa azo lazaina fa nihena raha oharina tamin’ny taona 2017. Ny antony, manana olana ara-tsakafo ny mponina ka ny gidro no lasa lasibatra. Araka ny resaka mandeha, ao koa ireo tsena mitady henan-gidro, ka azo lazaina fa sarotra ny mifehy azy io. Mila fanadihadiana sy fikarohana lalina ny momba azy io.
Manangom-baovao miaraka amin’ny CFIM
Tsara ny manamarika fa ny MNP, mandray anjara mavitrika amin’ny fanatanterahana ny fifanarahana nataon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana miaraka amin’ny CFIM (Centre de fusion des informations maritime) ho fiarovana ny sisin-tanintsika. Azo isan’andro ireo antontan-kevitra momba ireo sambo mihaodihaody manodidina ny valan-javaboahary. Manentana ny komity mpanara-maso any an-toerana ny MNP hanome vaovao marina sy haingana. Mampandre haingana ny CFIM ny MNP raha misy mampiahiahy. Rehefa azo antoka izany, hampitaina amin’ireo ny mpiara-miombon’antoka hiarahana miaro ny valan-javaboahary.